Dharka carruurta - sida loo kala sooco, maxay tahay in laga sameeyo iyo halkee laga iibsadaa si aysan ugu bixin maal? - Katalus.pl
Dumar badan oo da ‘gaar ah leh ayaa diyaar u ah mid ka mid ah doorarka ugu muhiimsan noloshooda – iyagoo ah hooyo. Doorkani waxay ubaahantahay tayo badan haweenayda aan la arki karin dhalmada kahor. Hooyadu waa inay samir muujisaa, daryeelaysaa, mas’uul ka tahay, dhaqaale ahaan, caqli badan tahay iyo kuwa kale oo badan. Laakiin kahor intaysan tani dhicin, hooyada uurka leh waxay leedahay go’aanno badan oo muhiim ah, oo ay kujirto arrinta labiska dhalashada ilmaha. Hooyooyinka bilowga ahi badanaa ma yaqaaniin waxa ay gashan karaan ilmaha halkii ay ka heli lahaayeen funaanadda caadiga ah ama surwaalada caadiga ah, qalabka ay tahay in dharka laga sameeyo iyo meesha laga raadsado.
Noocyada dharka dhallaanka
Qolka labiska ilmaha yar wuu ka balaadhan yahay kan dumarka caadiga ah. Waxa ku jira dhammaan noocyada dharka carruurta, qaarkood waxay leeyihiin muuqaal xiiso leh iyo magac xiiso leh. Laakiin sidee baad kuheleysaa?
Badanaa, ilmuhu dharka ayuu u labistaa. Waa dhar noocan oo kale ah dhallaanka, oo aan lahayn taas socod baradka uusan sameyn karin. Magaca ayaa ka yimid Ingiriisiga, jirku wuxuu macnaheedu yahay jir, iyo dharka noocan ah ee caruurtu wuxuu daboolayaa jirka oo dhan. Jirka ayaa lagu xiray dhexda, waxaa laga yaabaa inuu haysto gacmo dhaadheer ama gaaban. Mararka qaarkood jirku wuxuu leeyahay jirooyin. Kaftaniki waa qeyb kale oo sare oo dharka ka mid ah, oo, in kasta oo aan sida ugu wanaagsan la xiriirin, ay badanaa waxtar u leedahay, badiyaa xilliga qaboobaha. Jaakada noocan oo kale ah waxaa si badbaado leh loogu dhejin karaa jirka gacmo-gashi gacmeed ee ilmaha. Xaqiiqdii maaha qabow.
Mid ka mid ah dharka ugu muhiimsan dharka labiska ilmaha waa gogoldhig. Magaca waa mid aad ufiican, maxaa yeelay puppet wuxuu leeyahay gacmo iyo lugaha leh cagaha ku dhismay. Inta badan waxay u adeegtaa sida jaakadaha dharka lagu xirto, waa mid aad u raaxo badan in la xidho, iyo xitaa hooyo heersare ah dhib kuma qabin xiiridda dharka ilmaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in riwaayadda ay tahay mid la furi karo dhererka oo dhan, oo aan madaxa la dul saarin, maxaa yeelay labiska noocaas ah waxay noqon kartaa hal guuldarro weyn. Ramtuhu waxay qabtaan hawlo la mid ah kan kale. Halkee ayuu magacan ka yimid, qofna ma garanayo, laakiin waa nooc ka mid ah jidhka, oo sidoo kale lagu dhejiyay tallaabo, oo gaagaaban lagu daray. Isku-darkaani wuxuu abuuraa dhar loo yaqaan qafisyo, oo ku habboon maalmaha xagaaga iyo habeennada diiran.
Rompers ayaa caan ku ah Poland, in kastoo horeyba loo iloobey. Xayawaannada leh cagaha-dhex-dhexaadka ah ee ku dhammaada keliya garbaha ilmaha, inta badan ku xidhma seerayaal. Kani ma aha xalka aad ugu habboon ilmaha ama hooyada inay labbisto.
Liiska dharka dhallaanka ( gabdhaha iyo wiilasha ) waa inay jiraan surwaallo gaagaaban iyo kuwa seexda. Sidee jaakadaha gaagaaban ama surwaalku u egyihiin, qof walbaa waa ogyahay, laakiin waa maxay surwaalka nuskeed? Si fudud loo dhigo, kuwani waa surwaallo lugo xiran. Tani waa xalka xiisaha leh ee gebi ahaanba baabi’inaya adeegsiga sharaabaadyada.
Qalabka ugu wanaagsan ee dharka carruurta
Dharka carruurtu ma aha mowduuc fudud. Noocyo fara badan ma aha wax walba. Muhiim, marka aad dooraneyso xulashada ugu wanaagsan cunugga, sidoo kale waa agabkii dharka looga tolay dharkaan. Ilmaha yar weli ma haysto kulaylka saxda ah, inta badan wuu dhuumaa, wax badan ayuu dhaqaajiyaa, sidaa darteed waa muhiim in maadaddu fudud tahay, hawo badan tahay oo dabiici ah. Intaa waxaa sii dheer, maqaarka cunug yar ayaa ah mid aad u jilicsan, ma jiro caqabad ilaalin ah, sidaa darteed maaddooyinka aan dabiiciga aheyn ikhtiyaar uma aha. Nasiib darrose, tani had iyo goor ma ahan mid gacanta la socota qiimaha.
Waxyaabaha ugu caansan ee dharka ilmaha laga tolo waa cudbi. Dharka carruurta laga tolay cudbiga ayaa ah kuwo aad u jilicsan, raaxo badan, raaxo leh in la taabto iyo sidoo kale hawo badan. Suufka waa maaddo aan xakameynaynin dhaqdhaqaaqa cunugga, xulashada aad u wanaagsan ayaa sidoo kale ah gogosha sariirta ee gogosha sariirta. Cudbi wuxuu leeyahay xitaa noocyo kala duwan oo wanaagsan – suuf dabiici ah, oo horeyba qaalisan. Waxa kale oo suufka dabiiciga ahi waa suuf dabiici ah, oo la koray iyada oo aan loo helin qaab aan dabiici ahayn ama kiimiko ah.
Linen waxay muddo dheer ahayd walxo dabiici ah oo caan ah. Dharka carruurta ee laga sameeyay ayaa cimilo aad u fiican u leh, taas oo inta badan muhiim u ah xagaaga. Flax waxaa sidoo kale lagu gartaa waxqabadka bakteeriyada dila iyo cimri dhererkiisa marka loo barbar dhigo agabyada kale.
Muslin waa maaddo kale oo loo isticmaalo in lagu soo saaro dharka dhallaanka. Waxay ka samaysan tahay suuf, dhogor iyo xariir, waxaana mahad leh hab gaar ah oo loo isticmaalo wax lagu karsado, si fiican ayaa loo neefsan karo sidaa darteedna uma oggolaanayo canugga inuu kululaado.
Dharka carruurta – xaggee laga iibsadaa?
Dharka carruurta waxaa laga gadan karaa gabi ahaanba meel kasta – dukaannada onlaynka ah, dukaannada joogtada ah, suuqyada waaweyn ama dukaamada suuqa. Dhamaan hooyooyinka maahan inay haystaan ​​xaalad dhaqaale oo raaxo leh taasoo u oggolaanaysa inay lacag aad u badan ku bixiyaan dharka carruurtooda. Kuwa noloshiisu aysan u qalmin, zloty kasta oo la badbaadin karo waa muhiim. Mararka qaarkood, si kastaba ha noqotee, waxaa mudan in wax laga dhigo si aad ugu iibsato cunuggaaga dhar wanaagsan oo socon doona muddo dheer, ma dhaawici doono, wuxuu u ekaan doonaa qurux, oo ilmuhu wuxuu noqon doonaa mid deggan oo hawo leh.
Soo iibsi dowladeed waa qeyb ka mid ah maaliyadda dadweynaha oo howlahooda loo habeeyay si…
Previous Sharciga Iibsiga Dadweynaha iyo Rafcaanka Qaranka